Kwekhanda isitayela ngesiGreki emshadweni: isifazane, romantic, imfashini
Hairstyle e isitayela ngesiGreki, izithombe zazo kuyabonakala namuhla kunoma iyiphi umagazini fashion - kuyinto ukuthambekela okuvamile kwe-minyaka emibili edlule. Amalokhi Soft esilazayo efakwe nge hoops kanye imiqhele uvumele "unkulunkulukazi YesiGreki" uzizwa ukhululekile nenhle kuphi futhi kunoma isiphi isimo: emshadweni, Prom, idina party, usuku, amaqembu ngisho ekuphileni kwansuku zonke.
Ngesisekelo isitayela Greek - a emfushane nokulula, Ngakho-ke, ukwenza kwekhanda ezinjalo, asidingi isikhathi esiningi nokuzikhandla. Musa konakalisa a laying ngisho wezinwele-ongelutho, ngoba izinwele zakhe kwenziwa isitayela ngesiGreki, futhi kalula ukuba sekhaya ngaso. Into esemqoka ukuthi "nonkulunkulukazi YesiGreki" zazizinde futhi abacaphuni, kuyatuseka kusukela ubunjalo izinwele. zithandwa kakhulu eminyakeni yamuva nje isitayela ngesiGreki omakoti. Wedding - kungcono ngaso sonke isikhathi usuku onesizotha kakhulu ekuphileni wentombazanyana, futhi wonke umuntu ufuna ukubheka zomshado wakhe inkosi. Girls nge short ukugunda izinwele kwekhanda isitayela yesiGreki lomshado, ngeshwa, azitholakali, ngoba ukwenza nokupakisha esinjalo, izinwele kuyodingeka isikhathi eside ukuba sikhule.
Painted futhi izinwele ziyaqothuka ku ngefaskamu ngeke sisihle, ngakho kufanele kuqala sibaphathe nge imoto enhle noma buso okunomsoco. Uma nale mibandela, omunye isimo kubalulekile ukudalwa yimpumelelo kuyoba alinganisele ukusetshenziswa imihlobiso, ngoba kwekhanda isitayela ngesiGreki emshadweni ezihilela ukusetshenziswa ezihlukahlukene izakhi zokuhlobisa: kudabuke umhlane, izikhonkwane, emahhulahhubhu, Tiaras, rhinestones, nezigqizo, izimbali zemvelo kanye yokufakelwa kanye ngaphezulu.
Izinzuzo kwekhanda isitayela yesiGreki kusihlwa lomshado ngaphambi nezinye izingoma ekhanda impela eningi:
Okokuqala, kungaba kalula ugcizelele cheekbones futhi ukuma ebusweni, okuzokwenza isithombe bazwakale, abasebasha futhi ebukekayo ngaphezulu;
okwesibili, kwekhanda kalula kuhlangene sanoma yisiphi isitayela yokugqoka noma ngokubeka imihlobiso;
okwesithathu, ngu ezihlukahlukene ukuhlukahluka ungakwazi ukuwathola ngasiphi ukuma ebusweni nasemzimbeni Ukwakheka;
Okwesine, ukubeka izinwele kungaphazamisi futhi ayikhambi ku iso evumela ukuthi umakoti ukuba azethembe, kulula, ukhululekile nenhle;
nezokugcina, imicu ehlangeni izinwele akusho konakalisa lonke indlela, ngoba kubonakala sengathi umlobi endleleni yayihloselwe kusukela ekuqaleni.
I zezinwele edume kakhulu futhi ethandwa ngoba namuhla:
node ngesiGreki noma "korimbos", okuyinto phezu izinwele ezinde mihlobiso nge sokuvalelisa;
kwekhanda kwabobulili lapho izinwele bahlangana isixha bese ufihle esikhwameni-anezikhala okhethekile;
NgesiGreki Amathe, okuyinto wayebe zithandwa kakhulu kangangokuba zingatholakala emgwaqweni ekuphileni kwansuku zonke;
Bow lika-Apholo noma "cicada" lapho imiphini evuthayo yomnsalo like amaphiko cicada sika;
ikhabe tincetu, lapho zinyakaze izinwele kanye fit hairline kuya nape entanyeni, okubizwa ngokuthi tincetu;
lampadion - omunye zezinwele eziyinkimbinkimbi kakhulu, lapho kubonakala sengathi izinwele udlala amalangabi.
Nomaphi lapho ukhetho kwekhanda isitayela yesiGreki lomshado ikhethwa, umakoti uyohlale undab 'uzekwayo, ngoba buhlungu ezinjalo hhayi kuphela ukugcizelela ubuhle kanye ubufazi, kodwa futhi wenze isithombe romantic kakhulu futhi engaqondakali.
Kwekhanda lakho ekahle ku izinwele ezinde ngoba nsuku zonke
Ukuze ulwe ubuhle ezinhliziyweni zabantu, ufunde indlela ukhethe kwekhanda ubuso lomumo wakho!
Elegy - dada ingoma lyric art
Umuthi "Cernilton": imiyalelo yokusetshenziswa, ukuphikisana, nemiphumela emibi
Ancient China - Empire ngokwayo ngaphansi esibhakabhakeni
Amantombazane ezinsana: okusheshayo, okulula futhi okufudumele
Ifa inzuzo isilinganiso
Aleksandra Markina: imodeli biography
Polyethylene ifilimu nge Bubbles eziwusizo. Ingxenye Yesibili.
Batting: Yini oyikho nalokho isetshenziswa